Your Suggestion :: Nepal News, Nepali Samachar | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Thu, Aug 13, 2020 | 23:00:51 NST
कामदारको अवस्था नाजुक रहेका बेलामा दिवस मनाउनु र कामदारका अधिकारका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । उहाँले हजारौ नेपली कामदार जो आफ्नो अधिकार नपाएर खडिको तातो मरुभुमी मा घोडाले खाने चना खानाको रुपमा खादै रगतको पसिना बगाउदै छन । तर न त भने बमोजीम तलब पाउछन, न त करार अबधि मा मेनपावरलाई बुझाएको ऋणको चर्को ब्याजनै तिर्न सक्छन ? फर्केर आउदा न त घर रहन्छ न जग्गा ? यस्तो अबस्थामा दिबस मनाउनु ति पिडित कामदारको पिडामा उत्सब मनाउनु हो ।
पहिलो कुरा भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुनुहुपर्छ। सरकार, नेता, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणले नियम पालना गर्नुपर्छ। स्वरोजगारका लागि सरकारले आयमुलक योजना ल्याउनुपर्छ। प्राकृतिक साधन र स्रोतको गहिरो अध्ययन गरेर उपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि बाह्य पूँजी नभई स्वदेशी लगानीमा गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई पनि लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा स्वरोजगार हुनेको संख्यामा वृद्धि हुन्छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने स्वतः घट्छन। विदेश नै पठाउने हो भने जि टु जी सम्झौता गरेर पठाउनुपर्छ। अरु आकर्षक गन्तव्य पनि खोजी गर्नुपर्छ।
गंगा राना / मलेसिया
प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पाएको उपलब्धी नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासमा दोहोरिन मुस्किल छ। साधारण बहुमत समेत ल्याउन नसकिरहेका बेला यो परिणाम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि ऐतिहासिक हो। आपसी झगडामा वाम गठबन्धनले यो अवसर गुमाए भने नेपाली नागरिकले यिनीहरुलाई कहिल्यै माफी दिने छैनन। ५ वर्ष भित्र नेपाली नागरिकले शासन प्रणालीमा सुधार र देशको भौतिक तथा आर्थिक बिकासमा परिवर्तनको आभास पाउनुपर्छ।
अनमोल श्रेष्ठ / दुवई
भर्खर मात्र देश संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढेको छ। प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भर्खरै सम्पन्न भएको छ। अब स्थायी सरकार बन्छ भन्ने विश्वास धेरै नागरिकलाई छ। विकास गर्न ५ वर्षे स्थायी सरकार बन्नुपर्छ। आशा छ, वाम गठबन्धनले ५ वर्षका लागि सरकार बनाउँछ। विदेशमा भएका युवालाई तत्कालै देशमा नै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो छ। किनभने अब बन्ने केन्द्रीय सरकारको काँधमा काम धेरै छ। संघीयता सम्बन्धी बिमतीहरु मिलाउन समय लाग्छ। प्रान्तिय सरकारले विदेशिएका लाखौं युवालाई विकास र समृद्धिको ठाउँमा योग्यता अनुसार लगाउन सक्नुपर्छ। नेपाली युवाको कमजोरी यौटै छ, विदेशमा घण्टौं खट्ने, तर स्वदेशमा राम्रो काम गर्न नचाहने। यो परिपाटीको अन्त्य हुन चीनको जस्तो कम्युनिष्ट सरकारको आवश्यक छ । चीनमा इन्जिनियरले तारजाली ग्याबिन भर्छ। तर नेपालको सवओभरसियरले ढुंगा समेत छुँदैन । अनि, कसरी देश विकास हुन्छ र रोजगारी पाइन्छ। देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्न चार वटा वादको अन्त्य हुन जरुरी छ, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टवाद र ठगवाद।
यम श्रेष्ठ संगीतप्रेमी / मलेसिया
मेरो मनमा लाग्छ म परिश्रम गर्छु र अगाडि बढ्छु तर सोचेको जस्तो सजिलो छैन यहाँ जीवन।
पदमबहादुर खत्रि / दोहा, कतार
म नेपालबाट ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट सकेर हाल दुवईमा किचनमा सेफको रुपमा कार्यरत छु। नेपालमा प्राविधिक पढाइ भएकाले होला यहाँ काम र सबै कुरा कन्ट्र्याक्टमा भनिएझैँ पाएको छु। समग्रमा भन्दा दुवई बसाई खुशीमा नै बित्दै छ। यसको मुख्य कारण भनेको मेरो दक्षता र सीप हो जस्तो लाग्छ र विदेश आउने सबैले सीप सिकेर आउँदा राम्रै सेवा सुविधा र कमाई हुने हुन्छ। साथै म सबै कानुनी प्रकृया पुर्‍याएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृती लिएर आएको हुँ। यो काम त्यति झन्झटिलो पनि छैन यदि सबै प्रावधान पुर्‍यायोभने। सके नेपालमै केही गरेको राम्रो। नसके सीप सिकेर विदेश आउन मेरो सुझाव।
नबीन अधिकारी / युएई
मैले CTEVT बाट इलेक्ट्रोनिक तालिम लिएको छुँ। मैले भोगेको र दखेको सरकारले तालिम दिन्छ तर नेपालमा काम नै पाइदैन। अगाडि लागेका ठेकेदारले आ-आफ्ना ब्याकतिलाई काममा लगाउछन। कतै काम पाए पनि हामिलाई सम्झौता अनुसारको तलब दिदैनन्। त्यसैले हामि जस्ता गरिब कामदारले विदेशिनु पर्छ।
मनराज बोगटी / कुच्चि, कालिकास्थान, अछाम
म बाह्र बर्ष देखि कतारमा ड्राइभरको काम गर्दै आएको छुँ। प्राय कम्पनीमा भारतीय फोरम्यान हुन्छन् भने केहिमा नेपाली। जहाँ नेपाली राम्रो पदमा कार्यरत छन् त्यहाँ आफ्नै नेपाली दाजुभाइलाई दबाउने, पैसा नदिने, काममा दुःख दिने, ओभर टाइम नदिने जस्ता अती नै घटीया ब्याबहार गरि नेपालीले नेपालीलाई नै लुटिरहेका छन्।
महेन्द्र कुमार रोक्का / कतार
साउदी अरेबियामा आजिवन जेल परेका स्थानेस्वरलाई बचाउ अभियान नै चलाइदै रहेछ, राम्रो कुरा हो। बिगतमा पनि अमर राई र बमबहादुरको लागि चाहिने भन्दा धेरै रकम संकलन भएको थियो। अझ एकजनाको त पुरै ब्लडमनि अज्ञात ब्यक्तिले दिएको थियो। त्यो पैसा अहिले कहाँ र कोसँग छ ? त्यस्को सोधी खोजी कसले गर्ने ? यदि त्यो पैसा त्यस्तै निर्दोशलाई बचाउन राखिएको हो भने त्यसबाटै स्थानेस्वरलाई बचाउन सकिँदैन र ?
मलेसियामा न त कानुनसम्बन्धी कुनै भरपर्दो निकाए नै छ जस्ले कामदारका हितमा सघाओस् न त भनेजस्तो तलब सुबिधानै। अन्तराष्ट्रीय नियम अनुसार श्रमिकहरुको न्युनतम कामगर्ने समय र महिनाभरी पर्ने पब्लिक डे र अन्य बिदाको त कुनै अर्थ नै छैन। न त कम्पनीले दिन मान्छ, न यहाँको सरकारी निकायबाट छानबिन नै हुन्छ। दिनरातको असुरक्षित बातावरणमै दुःखमा दिन बिताउन बाध्य छ्न् यहाँ कार्यरत अधिकांश नेपाली कामदारहरु। नेपालसरकारको त कुरै नगरौँ, दुतावासले सहयोग गर्ला सोच्योकी बिचौलियालाई ठिक्क पारिन्छ।
करन महरा / मलेसिया
मलेसियामा सुरक्षा गार्ड कम्पनीले श्रम सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको न काम दिन्छ, न त तलब नै। आफ्नो ब्यक्तिगत सुरक्षाको त कुरा नै नगरौं। त्यस्तै परे आफ्नो कम्पनीको मानिसले नै कुन बेला मान्छे र पुलिस लगाएर कुटाउन बेर लगाउदैन। हामी श्रमिकले त नेपालका म्यानपावरलाई एक देखि दुई लाख सम्म बुझाएका हुन्छौं। मलेसियामा बेसिक नौं सय रिङ्गिट गरी जम्मा १६ सय हुन्छ। होस्टेल, लेबि, ड्रेस अनि यातायातको पैसा कट्दा र खाना खाँदा मुस्किलले एक बर्षमा ऋण तिरिएला। बरु यो भन्दा नेपाल सकारले मालेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ। किनकि नेपालको दूतावासले पनि दीर्घकालीन समाधान भन्दा कामदारलाई थम्थमाउने तिर मात्र लागेको देखिन्छ।
ठाकु योञ्जन / मलेसिया
समस्या त खासै त्यस्तो केही पनि छैन किन कि मसँग पहिला पनि एक चोटी दुबईमै काम गरेको अनुभव थियो। तर आफ्नो अनुभवबाट रोजगारीमा आउन तयारी गर्दै हुनुभएका दाजुभाइ र दिदिबहिनीलाई कुनै न कुनै सिप सिकेर मात्र आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। सिप सिक्न पैसा नहुने पनि थाहा छ मलाई तर सरकारले निःशुल्क तालिमहरु दिइरहेको हुन्छ। त्यो बुझ्दा राम्रो हुन्छ। तपाईं विदेश आउदै हुनुहुन्छ भने आफै म्यापावर कम्पनीमा गएर कुन देश र कम्पनी, कस्तो काम, कति तलब जस्ता कुरा आफैले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। बरु केहि रकम बढि खर्च गरेर भए पनि आफैले सम्बन्धित ठाँउमा गएर सबै कुरा बुझ्दा ठगीनबाट बच्न सकिन्छ।
कमल गिरि / छापहिले ५ गुल्मी (हाल दुबई)
घरको समस्या सामाधान गर्नको लागि हामी विदेश लाग्छौँ तर विदेशमा पनि समस्या नै समस्याको सामना गर्नुपर्दा आफ्नो मातृभूमि र जन्मभूमिको यादले सताइरहन्छ। काम त गर्नु नै छ जहाँ बसे पनि तर आँखाबाट आसु त्यो बेला झर्छ जब हामी आफ्नै नेपाली साथीबाट हेपिन्छौँ र लुटिन्छौँ। यदि हामी अनुशासनमा रही काम गर्‍यौँ भने यहाँको लोकल मान्छेसँग खासै डर हुँदैन तर आफ्नोसँग हुन्छ।
जय नारायण /मलेसिया
विदेशस्थित कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरु कुनै कानूनी झमेलामा परेमा उक्तकम्पनीले भिसा क्यान्सील गरिदिने कारणले गर्दा ति कामदारहरु ज्यादैनै मारमापर्ने गरेका छन्। पिडितको तर्फबाट न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि न नेपाल सरकारले चासो देखाएको छ न त कुनै रोजगारदाताले नै। कामदारहरुका कानूनीहकहितको लागि कुनै पहल नगरिनु राज्यको गैर जिम्मेवारिपन हो। जुन क्षेत्रबाट कर असुलिन्छ देशको प्राथमिकता त्यस क्षेत्रको सुधारमा हुनुपर्दछ। तसर्थ राज्यबाट आधिकारिकरुपबाट विदेश गएका प्रत्येक कामदारको न्यायिकहक सुनिश्चितता गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस्।
नाम उल्लेख नगरेको / इनरुवा